Lungiselela iMac yakho ukufika kweMacOS Sierra | Ngivela kwa-mac
Lungiselela iMac yakho ukufika kwe-MacOS Sierra
Sesiseduze kakhulu ukuthola uhlelo olulandelayo lohlelo olusebenzayo lwama-Macs ngokusemthethweni futhi lokhu kusiletha kwesinye sezikhathi lapho kuhle ukumisa kancane isigqi sezibuyekezo zilandelana futhi ucabangele ukufakwa ngokucophelela indlela. Iqiniso ukuthi lezi zinyathelo esizobona ngezansi zingenziwa nganoma yisiphi isikhathi futhi akudingekile ukulinda isibuyekezo sohlelo ukwenza kanjalo, kepha kulezi zikhathi lapho sizofaka uhlelo olusha lokusebenza kungaba yisikhathi esihle kakhulu ngoba kudinga izinyathelo ezimbalwa kunokufaka kabusha ngaphezulu kwalokho esivele sinakho.
Yebo, sonke sicacile ukuthi uhlelo lokusebenza olulandelayo lweMac luzobizwa ngeMacOS Sierra nokuthi kule nguqulo kunezelwa ezinye izici ezintsha ezithokozisayo kepha njalo ngokwesisekelo sohlelo lokusebenza lwamanje, i-OS X El Capitan. Ukwethulwa kohlelo olusha lokusebenza kuzoba ngoLwesibili oluzayo, Septhemba 20 futhi umsebenzi esizowenza manje ukushiya iMac ilulungele lolo suku. Ngalesi sithola isikhala sediski esiningi, yenza iMac ihlanzeke futhi ilungele ukuvuselelwa, kanye nokuhlangenwe nakho okungcono komsebenzisi ngohlelo olusha.
Okokuqala nokuphambili ukusho ukuthi kunezindlela ezimbili zokuvuselela isistimu yokusebenza ye-Mac, eyokuqala ukumane ulande uhlelo ku-Mac App Store nokulandela izinyathelo zokufaka, kanti eyesibili ukufaka lolu hlelo kusukela ekuqaleni. Kunoma ikuphi, into ebalulekile ngaphambi kokwenza lo msebenzi isisekelo sokwenza ukuhlanzwa okujwayelekile kwezicelo, amafayela nenye idatha esingasayisebenzisi futhi kusobala ukuthi senza ikhophi eyisipele ngaphambi kokuthatha noma yiziphi izinyathelo.
1 Ukuhlanza iMac
2 Yenza isipele iMac yakho
Lokhu kuzo zonke izimo isinyathelo esibaluleke kunazo zonke futhi ngokuqinisekile kuzosithatha isikhathi esithe xaxa, ngakho-ke ake sikuthathe kalula senze umsebenzi omuhle. Ngalo msebenzi sinezinye izinhlelo ezizosisiza ukuhlanza iMac, njengesibonelo I-CleanMyMac, kepha kungcono ukusula amafayela we-cache, ukususa izandiso ezingadingekile, amafayela ezivuselelweni ezindala, abafaki nazo zonke lezo zinhlelo zokusebenza esingazisebenzisanga ngesandla isikhathi esingaphezu kwenyanga bese sidlulisa uhlelo uma siluthengile.
Into enhle ukuhamba kancane kancane bese ushiya kuphela izinto ezibaluleke kakhulu esizisebenzisa ngempela kwi-Mac. Ngokuhamba kwesikhathi sizoba neMac egcwele izinto esingazisebenzisi ngakho uma senza lokhu kuhlanza okuncane kusibuyekezo ngasinye sizothola isipiliyoni esingcono ngayo yonke indlela ngohlelo olusha lokusebenza.
Yenza isipele iMac yakho
Kungenzeka ukuthi abasebenzisi abaningi bathi akudingekile futhi singakwazi ukwenza ngaphandle kwayo, kepha-ke lapho inkinga ivela futhi singenayo ikhophi eyenziwe, konke ukuzisola ngakho-ke into yesibili esizoyenza uma sesinayo iMac ihlanzekile ngamafayela, idatha nemibhalo esingayifuni, kunjalo ikhophi yokuphepha.
Indlela elula yokwenza le khophi ukusebenzisa ithuluzi elihlinzekwa ngu-lukuba ne-Apple kuma-Mac abizwa nge-Time Machine. Izinyathelo zilula kakhulu futhi singagcina namakhophi nomaphi lapho sifuna khona, kungaba yidiski lethu iMac noma idiski yangaphandle. I-Time Machine inikeza ithuba lokwenza amakhophi wesipele ngokuzenzakalela ukuze idatha yethu ihlale inesipele futhi yilokho esikuncomayo kokuthi ngivela kwa-Mac ngalo msebenzi. Nazi izinyathelo zokwenza isipele:
Sivula i-Time Machine kusuka kusithonjana kubha yemenyu noma kusuka ku-Launchpad kufolda ye- «others»
Kusuka kuphaneli yezintandokazi singakwazi ukumisa amakhophi azenzekelayo noma chofoza ukuze ugcine ikhophi kudiski
Sikhetha isipele uma sesivele siyilungiselele noma sichofoza kudiski yangaphandle exhunyiwe
Chofoza ngokulondoloza futhi yilokho kuphela
Kusuka kusithonjana kubha yemenyu singenza isipele ngokuchofoza ngqo kunketho ethi "Yenza isipele manje". Noma kunjalo lokhu kuyinto engahle ingadingeki kubo bonke abasebenzisi kepha kuyalulekwa ukwenza njalo ukugwema izinkinga futhi uhlale uneMac ngokusebenza okuphezulu. Khumbula ukuthi iMacOS Sierra 10.12 izotholakala ngesonto elizayo futhi singaqala ukukwenza manje.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Lungiselela iMac yakho ukufika kwe-MacOS Sierra
Alex Rodriguez kusho
Kungcono ukufaka kusuka ekuqaleni, kusuka ku-USB
Phendula u-Alex Rodriguez
UMerci Durango kusho
Ukuncoma kanjani lokhu uma ochwepheshe be-Apple bengakweluleki.
Phendula u-Merci Durango
Ngoba kuyinqubo enezinga elithile lobunzima okungekho lula kubantu abaningi abagcina kuphela ekusebenzeni noma ekutadisheni kuma-mac abo, ngakho-ke uma kukhona ingxenye yenqubo engalungile ingagcina yonakalisa imininingwane ebalulekile leyo kuzoba izizathu zezimangalo zabasebenzisi.
I-CleanMyMac ibucayi…. ???
Ngithengise okuncane kwami ​​engizokulungisa. Ukuvuselelwa ngakunye kudonsa izinsiza eziningi. Bengine-i7 ne-16gb yenqama ne-21,5 dual imac core yahamba ngokushesha. Yebo, ngenze konke kusuka ekuqaleni. Bathathe isikhathi esifanayo ukufaka kabusha i-blu ray. Ngesikhathi esifanayo
U-Alonso de Entrerríos kusho
I-Clean My Mac ingasetshenziswa ngokuphelele, ayilimazi ikhompyutha noma isistimu nhlobo.
Ngakolunye uhlangothi, le nguqulo entsha ye-OS X ayingezi lutho olusha kulokho i-El Capitan esivele inayo (ngaphandle kwe-SIRI namaphephadonga ambalwa).
Ngokwethembeka, akukufanele ukufaka uma ikhompyutha yakho yinhle
Phendula u-Alonso de Entrerríos
URoberto Payares Ochoa kusho
Okuhamba phambili kokuhle kakhulu, abangakwenza futhi okungisebenzele, ukushintshela kudrayivu ye-SSD, i-macbook pro yami ene-i7 kanye ne-16gb ngenqama, ne-hard disk yangempela engu-500gb, noma ngabe ngifaka malini bhala susa izinto, usebenzisa i-cleanmy mac, njll., njll, bekusahamba kancane, bengiyisigqila sendawo yokukhulula nezinhlelo zokusebenza ezingadingekile njll, kepha ukuhamba kancane lapho. Ekugcineni ngithathe isinqumo sokunikeza ithuba lokugcina futhi ngishintshele kudrayivu ye-SSD, ngiyifakile kusuka ekuqaleni, ukuthi kungithathe isikhathi esingakanani ukwenza ikhofi lapho konke kufakiwe nokunye, ukuhlukumeza izakhiwo nemishini njenge-flash, ukuqala kabusha kuthatha imizuzwana eyi-10 futhi ngaphambi kokuthi ingaze iyicishe ngoba kuthathe imizuzu emithathu ukufika esikrinini sasekhaya, noma kunjalo ngikhubaze i-firevault ngoba yayihamba kancane. Manje ngaleli Sonto ngafaka iGM yaseSierra futhi kwathatha imizuzu engu-3 ukuyivuselela, ibethela i-firevault ingaphansi kwalutho, angibonanga ukuthi iphela nini. Ukuziphatha kwale ndaba ukuthi, noma ngubani one-mac futhi osevele ekhombisa izimpawu zokuguga ngoba uyephuza kakhulu, futhi uma inketho yokushintshela kwenye entsha ingekho ezinhlelweni zakhe, kanye nami ngoba nginakho thanda kakhulu ama-6 ″ ami; empeleni, i-SSD ikuvuselela kabusha kuze kube sezingeni eliphezulu, iqembu lakho lizolazisa futhi lizokukhombisa. Ngicabanga ukuthi ngalokho ngineminyaka embalwa eyengeziwe noma inqobo nje uma i-SSD isekhona, kepha ngijabule kakhulu ikakhulukazi ngenxa yejubane elihlala liligcina noma ngabe line-gb yesikhala samahhala kuphela, nokuthi ibhethri ihlala isikhashana, kusobala ngoba azikho izinhlelo zemishini ngaphakathi.
Phendula uRoberto Payares Ochoa
UJose Carlos kusho
Ngiyavumelana noRoberto. I-SSD iyimpilo. Ngokuqondene nemali ngizofaka i-500 GB Samsung SSD. Uma ngine-pasta, i-1TB
Phendula uJose Carlos
Sawubona, zombili zombhali wale ndatshana kanye nabahlanganyeli: kulabo bethu abanesahlukaniso esenziwe ngeBootCamp nge-Windows efakiwe, kungenzeka ukwenza ukufakwa okuhlanzekile ngaphandle kokukhipha ukwahlukanisa okushiwo noWin, okungukuthi, kuphela kufakwe ukwahlukanisa kweMacOs ngaphandle kokushintsha enye?
Iris Martinez kusho
Sawubona! Ngibe ne-mac yami cishe iminyaka engu-3-4 futhi angikaze ngenze ukufaka okuhlanzekile. Angifuni ukuthinta noma yini kuma-partitions nezinto ngoba ngiyaqiniseka ukuthi ngizokuphazamisa… Umbuzo wami uthi; Uma ngisusa yonke into kwi-mac yami bese ngiyishiya sengathi bekusha efektri, kusuka ku-App Store lapho i-macos sierra iphuma, ngingayifaka ngqo ngaphandle kokufaka eyedlule? Ngiyabonga kusengaphambili.
Phendula u-Iris Martínez
Kuya ngokuthi. Iyiphi i-OS X oyifakile njengamanje?
UJose Eduardo Troconis Ganimez kusho
hlanza i-mac yami kufanele uyithenge ngoba uma kungenjalo ukuhlanza eyenzayo kungama-megabytes ambalwa kuphela !!!, lokhu akushiwo ku-I AM FROM MAC !!!
Phendula uJose Eduardo Troconis Ganimez
Le yindlela ongavikela ngayo iTrackpad yakho yeMacBook ezingozini ezingaba khona
IMicrosoft ihlasela iApple futhi ngeSurface Pro 4 yayo